BEELAHA HAWIYE oo soo saaray go'aano xasaasi ah - Caasimada Online
Home Warar BEELAHA HAWIYE oo soo saaray go’aano xasaasi ah
BEELAHA HAWIYE oo soo saaray go’aano xasaasi ah
Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye oo war-murtiyeed ka soo saaray khilaafka siyaasadeed ee Ra’iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaa si buuxda u taageeray ra’iisul wasaare Rooble iyo xukuumadiisa.
Banaanbaxaas oo la shaaciyey inuu ka dhici doono fagaaraha Taallada Daljirka Daahsoon ayaa cinwaan looga dhigay, “Afgembi diidnay, doorashaan rabnaa.”
“Beesha Hawiye waxay saldhig u tahay dowladnimada Soomaaliya, waxayna dooneysaa in hoggaanka dalka la isku wareejiyo, iyadoo la raacayo shuruucda dalka,” ayaa lagu yiri war-murtiyeedka.
Waxay shaaciyeen in uusan jirin damac kursi oo beesha uga jira garabka Farmaajo oo ay ku tilmaameen ‘kaligi-taliye’ “Ma jirto xuquuq siyaasadeed oo nooga maqan ama uu nasii karo kaligii taliye Farmaajo,” ayaa lagu yiri bayaanka Hawiye.
“Kooxahaasi waxay wareejinayaan inay shireen ‘Farmaajo iyo beesha Hawiye’ waxaan shacabka Soomaaliyeed u cadeyneynaa in uusan jirin habayaraadee wax kulan ah oo aan la yeelanay Farmaajo,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaan ka soo baxay beesha Hawiye.
Sidoo kale beeshu waxay cadeysay in aysan jirin sabab ay hadda kadib xataa ula kulanto Farmaajo, maadaama aysan waxaba uga xireyn, “Waxaan cadeyneynaa in aysan jirin cid wakiil ka ah beesha Hawiye oo la kulmeysa madaxweynihii hore kiligi-taliye Farmaajo,” ayaa lagu yiri bayaankaan.
“Waxaan u cadeyneynaa umada Soomaaliyeed, in aanaa u dulqaada doonin cid kasta oo xagal-daacineysa dadaallada uu wado ra’iisul wasaare Rooble, kuwaas oo ku saabsan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo si nabad ah dalka uga dhacda,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaan ka soo baxay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beelaha Hawiye.